Izindawo ezinhlanu ezishibhile ongazivakashela ngo-5 | Izindaba Zokuhamba
Izindawo ezinhlanu ezishibhile ongazivakashela ngo-5
Iphupho labo bonke abahambi ukubona umhlaba. Ukuhamba uzungeze iplanethi, thola izindawo eziyingqayizivele, funda ngamanye amasiko futhi unambithe ukudla okupheka okumnandi kakhulu.
Kodwa-ke, kwesinye isikhathi isabelomali esifanele ukufeza leli phupho asihambi kahle njengoba besingathanda. Kunoma ikuphi, ngokuguquguquka okuthile, ukuzimisela nomzamo ungahlala uhamba kakhulu ngokomnotho.
Ngalesi sizathu, Kusuka e-Actualidad Viajes sifuna ukukuphakamisa izindawo ezingabizi kakhulu ongazihambela ngo-2017. Ngemuva kwakho konke, unyaka ozayo ususondele futhi kufanele ukuthi uhlele ukuthi yini esizoqala ukuyenza.
Mhlawumbe indawo eseduze kakhulu exotic eSpain. Ukuba ibhuloho phakathi kweMpumalanga neNtshonalanga, yindawo enhle yokuhamba noma unemali encane.
IMorocco inokuningi engakunikeza: ilanga, ukungenisa izihambi, ukuphumula, isiko nokuzidela. Yizwe elifinyeleleka lapho ungajabulela khona umoya wasempumalanga omangalisayo ngemali engatheni. Isibonelo, iMarrakech idolobha eligcwele impilo nokuguquguquka. UTangier no-Essaouira babhekene nokuvuselelwa ngamahhotela amasha neziphakamiso zabavakashi ezithakazelisa kakhulu.
Ngokwengxenye yayo, u-Asilah unemithi enakekelwa kakhulu eMorocco. I-gastronomy yayo idume kakhulu njengoba abantu basenhlonhlweni behamba lapha bezama izinhlanzi zasendaweni. Elinye idolobha okufanele livakashelwe yiFez, isikhungo samasiko noluphawu lokufunda ezweni.
ICasablanca, Rabat, Tangier ... noma yiliphi idolobha laseMorocco lilungele ukuzijabulisa kanye nokujabulela iholide eliyifanele kahle.
Njengoba izindiza zingabiza ngentengo enkulu, imigwaqo emihle kakhulu yokuhamba usuka eSpain kanye namanani aphansi kanye edolobheni, iPorto isibe yindawo ethakazelisa kakhulu ongaya kuyo ngo-2017.
Eminyakeni yamuva nje, leli dolobha elisenyakatho nePortugal lenze uguquko olukhulu futhi namhlanje selinesikhungo esihle kakhulu sasemadolobheni esineminyuziyamu eminingana, ama-trams amadala, ukuhamba ngezinyawo emfuleni, i-graffiti yobuciko kanye nezinye izindawo zewayini, ngakolunye uhlangothi lweDouro, Kakade bafanelwe ukuvakashelwa bebodwa ukunambitha iwayini lasendaweni elidumile.
IPhilippines ifana nezinsimu ezilayisi eziluhlaza, amadolobha amahle, izintaba-mlilo ezinhle, nabantu abathanda ukuhlala bethanda. Ngokungafani namanye amazwe aseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, Akugcwele kangako ngezivakashi ngakho-ke kuyindlela enhle yokujabulela ukubaleka okude.
Kuyisiqhingi esakhiwe ngeziqhingi ezingama-7.107 esabizwa ngeNkosi yaseSpain uFelipe II. AbaseSpain bachitha cishe iminyaka engamakhulu amathathu lapho, ukuze ukuthinta kweSpanishi kusekhona ezweni ngandlela thile.
Ingxube yamasiko namasiko yenze iManila, inhlokodolobha, indawo egcwele ukugqama. Ibuye ibe nesikhathi esedlule samakholoni ezindongeni zangaphakathi zedolobha lapho isihambi sizothola khona izitolo zobuciko kanye nama-patio angaphakathi anikeza ukuphumula kusuka kuphithizelo lwedolobha.
Ezokuvakasha eRussia ziyanda. Kunoma yiliphi idolobha, elikhulu noma elincane, kuhlale kunendawo ethile oyithandayo. Izibonelo ezichaza ukuthi kungani ifa lomlando namasiko waseRussia liwumthombo wodumo nokuziqhenya kwaleli zwe.
IMoscow, ngokwamahhotela nezindawo zokudlela, isabiza ngandlela thize kodwa kulo lonke elaseRussia yonke into ishibhile. Isibonelo, unganqamula izwe eTrans-Siberian, uthole amadolobha afana neNovgorod (inhlokodolobha yokuqala yaseRussia), iTomsk (eSiberia) noma iKazan (eTatarstan).
Futhi, Ukuya eRussia ngo-2017 kuwumqondo omuhle hhayi kuphela ngenxa yamathuba angenamkhawulo ekunikezayo kodwa ngoba ngesikhathi seNdebe Yomhlaba Yebhola Likanobhutshuzwayo ka-2018, amanani cishe azobiza kakhulu futhi kunezivakashi eziningi kakhulu.
Itholakala phakathi kweMexico neGuatemala ogwini lwaseCaribbean eMelika Ephakathi, iBelize ingelinye lamapharadesi amahle wokudilika nge-scuba nokuhweba ngezinyoka. Indawo efanelekile kubathandi bezemvelo ngoba kungenye yezingqinamba ezimbalwa ezisalele emhlabeni.
Ngalo mqondo, ugu lwaseBelize luyikhaya lomqhele wamakhorali omude kunayo yonke eNtshonalanga Nenkabazwe, kanye nohlelo olubanzi lwemihume yasolwandle. Iphesenti elikhulu lobuso bezwe limenyezelwa njengesiqiwu esivikelekile, ngakho-ke akumangazi ukuthi izindawo eziningi zithathwa njengengcebo eyiqiniso. Isibonelo, isithombe sayo esaziwa kakhulu yiBlue Hole (umgodi omkhulu oluhlaza okwesibhakabhaka) lapho ungangena khona phakathi kwama-stalactites, ama-stalagmites kanye noshaka imbala.
Ngokombono wamasiko, kukhona nezindawo ezithokozisayo zamaMaya ezifihlwe ehlathini eliqhakazile laseBelizean, elisendaweni eseningizimu yeNhlonhlo Yucatan. Ezinye zazo, njengeCaracol, ziye zambiwa futhi zabuyiselwa, zaveza imidwebo ekhangayo yamatshe kanye nokwakhiwa kobuhlakani obedlulele.
Kuyafaneleka nokuvakashela iBelize City, ogwini loLwandle lweCaribbean, idolobha elinabantu abaningi ezweni kanye nenhlokodolobha yangaphambili ngaphambi kokuba idluliselwe eBelmopan e1970.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Izindawo ezinhlanu ezishibhile ongazivakashela ngo-5
4 izimakethe ze-gourmet oyofuna ukuzivakashela eSpain
Okokuzithokozisa okungu-10 ongahlala eNew York